U-Omah Lay ogama lingu-Apple Music's Africa Rising Artis-Iindaba zaseNigeria kunye
Omah walibeka igama lobuso be-Apple Music Africa Rising, isibini esimhlophe esarhola umpu kumama omnyama esimangalelweyo, uLeroy Sane ugqibezela ukufudukela eBayern Munich. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. U-Omah Lay wabiza igama lokuqalisa komculo we-'Afrika Rising 'ngumculi we-Apple Music
Namhlanje, iApple Music ibhengeze 'i-Rising ye-Afrika,' inkqubo entsha yomculi ophuma kabini ngenyanga kunye noluhlu lwedlala eyenzelwe ukubonisa, ukubonisa nokuphakamisa italente yase-Afrika ekhulayo. U-Nigerian ozelwe, imvumi yeAfro-fusion, kunye nombhali wengoma Omah Lala Uya kuba ngumculi weqela lokuqala lenkqubo entsha yoMculo we-Apple.
Rhoqo kwiinyanga ezimbini, i-Africa Rising iza kufaka umzobi onjengo-Omah Lay, okhethwe liqela labahleli be-Apple Music kwilizwekazi kwaye asebenzise amandla apheleleyo eqonga ukubakhulisa kumculo womculo e-Afrika nakwihlabathi liphela.
Le nkqubo ikwaquka uluhlu lokudlala oluhamba ne-Africa Rising cover star kunye nelinye ilizwekazi elishushu nelisashushu lamagcisa kwilizwe lonke.
Ukubhaliswa kwabavoti: I-EC yazisa malunga nolawulo lomngcelele eGhana
Kwinkqubo entsha, amagosa ekhomishini akhupha inani elincitshisiweyo lemazisi kubabhalisi ekufuneka beye kumaziko obhaliso mihla le ukuze babhaliswe.
IKhomishini yoNyulo yaseGhana (EC) yazise ngenkqubo yokulawula umgca emitsha yokunciphisa inani elixineneyo lababhalisi ababeka amaziko okubhalisa amaninzi ukuze babhalisele amakhadi okuzazisa.
UMlawuli weeNkonzo zoNyulo kwi-EC, uGqr. Serebor Quarcoo, owenza le nto waziwe kumajelo osasazo izolo, wathi eli nyathelo liza kunciphisa amanani kumaziko obhaliso kwaye bancede ukuphucula imigaqo-nkqubo yokungena eluntwini.
3. UMzantsi Afrika: Urhulumente ubongoza ukuba kuthathele ingqalelo ukuvalwa ngokupheleleyo kwezikolo
Bazali bacela ukuvalwa ngokupheleleyo kwezikolo, ngeli lixa kuxhaphakileyo kusulelo losulelo lwe-COVID-19 elizweni. UMzantsi Afrika unamatyala ayi-168,061 aqinisekisiweyo ngamatyala e-coronavirus.
La manani abandakanya ootitshala kunye nabafundi, ababuya esikolweni kanye xa ilizwe langena kwiAlert Level 3 ukuvalwa kwezikolo ekuqaleni kukaJuni. #SaveOurChildrenIqela labandwendweli elenziwe ngabazali kunye nabahlangeneyo, lihlabe ikhwelo kwiSebe leMfundo esiSiseko ukubuyela kwisimo sokuvalwa ngokupheleleyo.
4. Esi sibini sikhuphe umpu kuMama oMnyama kunye neentombi ezityholwa ngokuhlaselwa
UJillian Wuestenberg, 32, kunye no-Eric Wuestenberg, oneminyaka engama-42 ubudala, baxabene nosapho ngaphandle kweChipotle eMichigan.
Isibini esimhlophe esivela eClarkston, eMicrosoft, sabanjwa saza satyholwa ngemibuzo emva kokuba ividiyo ibonise umfazi ekhomba umpu kumama omnyama kunye neentombi zakhe ezimbini. UJillian Wuestenberg, 32, kunye U-Eric Wuestenberg, I-42, basiwa elugcinweni ngolwe-Lwesithathu, ngala mhla baxabana ngalo nosapho kwilokishi yaseChipotle kwilokishi yase-Orion.
IOfisi yoMtshutshisi we-Oakland County yabhengeza ngoLwesine ukuba ii-Wuestenbergs zatyholwa ngokuhlaselwa. Abaphathiswa babizelwa eChipotle malunga ne-6 pm ixesha lendawo malunga neengxelo zokusongelwa kompu, IOfland County Sheriff's Office yatsho esipapasho. Zombini ii-Wuestenbergs kunye nosapho, abangazichazanga abasemagunyeni, babebize amapolisa.
5. U-Leroy Sane ugqiba ukuhamba kweBayern Munich ukusuka eManchester City
Ukubonakaliswa kukaLoroy Sane kuphela kwePremier League ngeli xesha lokuphumelela kukaBurnley kwiSixeko
ULoyoy Sane uthi iBayern Munich yiklabhu enkulu eneenjongo ezinkulu emva kokutyikitya isivumelwano seminyaka emihlanu kwiBundesliga. I-winger yaseJamani, engama-24, ijoyine iManchester City kwimali yokuqala ye- $ 44.7m enokuphakama iye kwi- £ 54.8m.
USane wajoyina iCity esuka eSchalke ngo-2016 ye- $ 37m kwaye waphumelela izihloko ezibini zePremier League, indebe ye-FA kunye neNdebe yeHlabathi ezimbini.
"Ndifuna ukuphumelela iindebe ezininzi kangangoko ndinakho neBayern, kwaye i-Champions League yeyona nto iphambili," uthe.
Uhlobo Rave Julayi 3, 2020